Otu esi anọgide na-ere ahịa na-enweghị agbanyụọ ụzọ gị | Martech Zone
Otu esi anọgide na-ere ahịa na-enweghị gbanyụọ ụzọ gị
Mọnde, Febụwarị 21, 2022 Mọnde, Febụwarị 21, 2022 Samir Sampat
Oge bụ ihe niile na azụmahịa. Ọ nwere ike ịbụ ihe dị iche n'etiti onye ahịa ọhụrụ nwere ike ịkwụ ụgwọ yana kwụgidere ya.
A naghị atụ anya na ị ga-eru n'isi ahịa na mbọ oku izizi gị. Ọ nwere ike were mbọ ole na ole dịka nyocha ụfọdụ na-egosi ya nwere ike were ihe ruru oku iri na asatọ tupu ị nweta ndu na ekwentị maka oge mbụ. N'ezie, nke a dabere n'ọtụtụ mgbanwe na ọnọdụ, mana ọ bụ otu ihe atụ nke ihe mere ọ ga-eji bụrụ ihe ịma aka maka ụlọ ọrụ ịzụ ahịa iji mara usoro atụmanya ahịa.
Na post a, anyị ga-ekpuchi ihe niile ị ga-achọ ịma gbasara ịkpọ oku ịre ahịa na-eduga, yana nke ka mkpa, ịkpọ oku ahịa nke na-eduga ngbanwe ndị ahịa ọhụrụ. Ọ bụ ezie na azụmahịa ọ bụla ga-enwe usoro mgbasa ozi dịtụ iche, enwere ụfọdụ ndụmọdụ na omume kacha mma nwere ike inyere gị na azụmahịa gị aka n'ụzọ ime mkpebi ka mma.
Tupu anyị gwuo ala n'ime nke ahụ, ka anyị leba anya ngwa ngwa na ọnọdụ ahịa, gbadaa site na ọnụọgụ.
Ọnụọgụ ọnụ ahịa ahịa na nlele
Isi Iyi: Invesp
Dabere na HubSpot na Spotio:
40% nke ndị ọkachamara na-ere ahịa niile na-ekwu na ịtụ anya bụ akụkụ kacha sie ike nke ọrụ ha
Ugbu a, naanị 3% nke ndị ahịa niile tụkwasịrị ndị nnọchi anya ahịa
80% nke ahịa chọrọ opekata mpe ise oku na-esochi, ebe ihe dị ka 44% nke ndị na-ere ahịa na-ahapụ mgbe otu nsonye gasịrị (oku zuru ezu abụọ)
Ndị na-azụ ahịa na-akọ na o yikarịrị ka ha ga-anabata oku ịre ahịa ma ọ bụrụ na emere ya n'oge ekwekọrịtara na mbụ
Ọ nwere ike were ọtụtụ dị ka Oku 18 na-akpọ ka gị na onye nwere ike jikọọ
Ikpe maka oku ịre ahịa na-eduga nwere ike ịgbagwoju anya. Otú ọ dị, ọ na-enyere aka ịghọta ebe ihe guzoro ka ị mara ka ị ga-esi gaa n'ihu iji nweta ihe ịga nke ọma maka azụmahịa gị. Na ịza ajụjụ nke ogologo oge ị ga-echere n'etiti oku, ị ga-enwe ike ịchọta nguzozi siri ike nke ịdịgidesi ike n'enweghị iwe iwe atụmanya ịre ahịa gị.
Enwekwara ọtụtụ data dị n'ebe ahụ nke nwere ike inye aka duzie usoro mgbasa ozi gị, kwa.
Ugbu a, ka anyị kwuo n'ezie maka mgbasa ozi ahịa n'onwe ya na ịkpọ oku ahịa.
Ịkpọ oku ire ere
Mgbe ị mere oku ịre ahịa nke mbụ, ị ga-achọ ịdị njikere nke ọma maka nsonaazụ ọ bụla nwere ike si na oku a pụta. Dịkwa njikere ka ndị ndu gị zaa oku a wee nyefee ọkwa gị ka ị ga-ahapụ ozi wee nwaa ha ọzọ ma emechaa. Ma nke ahụ bụ ajụjụ nde dollar—ole ka emechara?
Onye ọ bụla ndu na ndị ahịa ga-adị iche, dị ka ọ na-emekarị na ihe ọ bụla ọzọ na ndụ. Otú ọ dị, mgbe ị na-akpọ ahịa ahịa mbụ, ị ga-achọ ijide n'aka na ị dị njikere imeghe ụzọ maka mmekọrịta ọhụrụ na onye ahịa ọhụrụ nwere ike. Ọtụtụ mgbe, ndị na-ere ahịa na-aga ozugbo na njedebe, nke na-eme ka ha mechie ngwa ngwa tupu onye na-akpọ ya mara na a na-ere ha.
Ọ bụrụ na ndu azaghị oku gị nke mbụ, ị kwesịrị ịhapụ ozi olu dị ụtọ mana nke zuru oke ma ọ bụrụ na enwere nhọrọ ịme ya. Kpọọ ha ka ha kpọọ gị azụ na nọmba kacha mma iji rute gị ma ọ bụ nye ha ndụmọdụ na ị ga-enwe obi ụtọ ijikọ n'oge kacha mma maka ha. N'ụzọ dị otú a, ị na-enye nhọrọ nduzi gị ịhọrọ na mmetụta nke njikwa na ọnọdụ ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-agbanwe mkpebi ha naanị site n'inye ha nhọrọ ịnata oku azụ n'ụbọchị na oge haziri.
Nsoso site n'inyefe na atụmanya
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ahịa na-atụ anya nzaghachi mbụ maka ajụjụ sitere na azụmahịa n'ime nkeji 10 ma ọ bụ obere, n'ọtụtụ ọnọdụ, ha na-enye ntakịrị mgbanwe ma a bịa na kọntaktị na nkwukọrịta na-aga n'ihu. Ndị ọkachamara mmepe azụmahịa na-atụ aro ka ị kwe ka 48 awa mgbe ị kpọchara ụzọ tupu ị gakwuru ha ọzọ. Nke a na-eme ka o doo anya na ị nyela oge maka oge ọrụ ha na-arụ ọrụ n'ebughị ụzọ were iwe ma ọ bụ enweghị olileanya. Ọ na-enyekwa gị ụzọ oge iji tụlee ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị yana ma ọ bụ ihe ha chọrọ ma ọ bụ mkpa.
Ị nwekwara ike ime ka ndị na-atụ anya mara na ha nwere ike gakwuru gị nakwa na ha nwere ike ime ya site na ọwa dị iche iche. Nke a na-eme ka ha họrọ ọwa nke ahụ na-eru ha ala ma yiekwa ka ị nwekwuo ohere ịnweta nzaghachi nloghachi. Ma ọ gwụla ma akpọtụrụla gị kpọmkwem ma ọ bụ rịọ ka ị weghachi oku ozugbo, akpọla otu ndu ugboro abụọ n'otu ụbọchị. Ọ na-ahapụ uto ọjọọ n'ọnụ ụzọ n'ihi na ọ na-apụtakarị dị ka ntakịrị ihe na-achọsi ike na enweghị olileanya.
Ntụle obi ụtọ, ọ dị ka ọ bụ ebe n'etiti awa 24 na 48 maka oku nke abụọ na nke na-esote. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-akpọla atụmanya gị ugboro abụọ n'izu a, ị nwere ike ịchọrọ ichere ruo izu na-abịa maka mbọ oku mgbasa ozi ọzọ. Ọ bụ omume ilezi anya n'ụzọ siri ike ebe a, n'ezie, na ị ga-ahụ ihe kacha mma maka gị na azụmahịa gị. Site n'ịkọwapụta otu oku nleba anya gị si aga, ị nwere ike nweta echiche kacha mma maka ihe kacha mma maka otu gị.
N'ezie, otu ụzọ iji hụ na ihe niile A na-akpọ oku mgbasa ozi ahịa (ma nata) n'oge bụ ikwe ka onye ọzọ rụọ ọrụ maka gị na ndị otu gị. Outsourcing na-enye gị ohere ịnweta otu ọkachamara n'akụkụ gị nke na-aghọta ihe niile na-abịa na ịme oku ahịa na-esochi nke ọma, oku nkwado, na ihe ndị ọzọ iji mee ka azụmahịa gị na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị kpebie na ọ ga-akara gị mma ịhapụ ịkpọghachi onye ọzọ ka ị na-elekwasị anya na ndị ahịa gị, nke ahụ ga-ahụ na eweghachiri oku ọ bụla n'oge kwesịrị ekwesị yana nsonaazụ kacha mma.
Smith.ai Ndị ọrụ na-akpọ oku na nnọchite gị, na-emeziwanye ndị ọrụ gị na-agba ọsọ na-ebughị ibu nke kwesịrị ịkpọtụrụ ndị ahịa. Ha ga-akpọghachi ndị ndu n'ịntanetị bụ ndị mejuputara fọm webụ, kpọtụrụ ndị na-enye onyinye maka mmeghari onyinye, na-achụpụ ịkwụ ụgwọ na akwụkwọ ọnụahịa akwụghị ụgwọ, na ndị ọzọ. Ha ga-ezipụ ozi-e na-esochi na ederede mgbe oku ọ bụla gachara iji hụ na ejirila njikọ.
Soro ngwa ngwa mgbe Smith.ai ndị ọrụ mebere na-eje ozi dị ka otu mgbasa ozi gị:
Mụtakwuo maka Smith.ai
Tags: aiAmamịghe echicheokpokoroije ozigboịkpọ okuọnụ ọgụgụ oku ire erestats oku ire erensonye ahịaahia ahiasmith.aispotiomebere okumebere outbound inyeakaonye enyemaka olu
Samir Sampat bụ onye na-akpakọrịta ahịa na mmemme Smith.ai. Ndị na-anabata 24/7 nke Smith.ai na ndị na-akparịta ụka dị ndụ na-ejide ma gbanwee ụzọ site na ekwentị, nkata webụsaịtị, ederede na Facebook. Ị nwere ike iso Smith.ai na Twitter, Facebook, LinkedIn na YouTube.
Ụzọ kachasị mfe iji wedata Shopify CSS gị nke a na-eji mgbanwe Liquid
Adobe Creative Cloud Express: Template mara mma maka ọdịnaya mgbasa ozi ọha, akara ngosi, na ndị ọzọ